Alshabaab oo sheegtay dilkii xildhibaan Madeer – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Alshabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay dilkii shalay Muqdisho loogu geystay xildhibaan Sheekh Aadan Madeer, kaasoo la toogtay kadib markii uu ka baxay masjid uu ku tikaday salaadda Jimcaha masjid ku yaalla Xamarweyne.
Afhayeenka howlagllada Alshabaab C/caziiz Abuu Muscabayaa Idaacadda Andalus ee Shabaab leeyihiin u sheegay in ciidanka gaarka ah ee Alshabaab ay dileen Sheekh Aadam Sheekh oo ahaa madaxii guddiga maaliyadda Baarlamaanka.
“Ciidanka Mujaahidiinta ayaa gudaha Muqdisho ku dilay Xildhibaan ka tirsan dawaaqiidda ee sharci dajiyayaasha sheegtay waana sii socan doonaan howlgallada lagu ciribtirayo cadawga” ayuu yiri Abuu Muscab.
Al Shabaab waxay sheegtay in ugaarsiga xildhibaanada iyo saraakiisha DF-ka uu yahay hadaf mashruuc iyaga u ah, sida ay yiraahdeen ayna ka go’antahay in umadda laga hor leexiyo kuwa ciidamada shisheeye u sharciyeeyay qabsashada dalka Soomaaliya. Sida hadalka loo dhigay,
“Allaha idin barakeeyo ayaan leenahay ciidanka mujaahidiinta ee wilaayada Banaadir ka howlgala, nimankan xildhibaanada ah ee sharci dejiyaasha sheegta waxaan u beegsanaynaa way caddahay, waa niman sharcigii ilaahey sharci gacan ku sameys ah oo gaalo soo agaasintay ku bedelay, waana sii wadi doonaan laynta qolooyinkan cadawga dalka kusoo hoggaamiyay” ayuu sidoo kale yiri Abu Muscab.
Waa xildhibaankii 3-aad ee Muqdisho lagu dilo laga soo bilaabo bishii Ramadaan, iyadoo horay loo dilay Xildhibaan Maxamed Maxamuud Xeyd iyo Xildhibaanada Saado Cali Warsame.